I-100% yase-Italy yokuqala i-TrovaWeb ku-Roadshow
I-100% yase-Italy iqalisa iTrovaWeb ku- "Roadshow"
ITrovaWeb Srl isiqalo esisha se-100% seMessinese izipho: Roadshow 2019
Path emidlalweni yeshashalazi ebaluleke kakhulu yase-Italy yezinyathelo eziningi zezentengiselwano, ngifuna ozakwethu abasha ukukhula ngokwengeziwe.
TholaWeb kuRoadshow 2019
I-TrovaWeb Srl - I-100% yase-Italy iqala phezulu uyakujabulela ukumemezela ukuqala kukhetheke kakhulu I-Roadshow: uhambo olunezigaba eziningi kulo lonke ithempeli. Umcimbi uzokwazisa izinsizakalo kanye nekhono lale nkampani eyaziwayo Messina, emadolobheni amakhulu ase-Italy ngokuhlangana nemicimbi emikhulu.
Kusukela ngomhla ka-21 Septhemba 2019, ngokuqhubeka isonto lonke, sizolandela lesi sinyathelo ngesinyathelo, ngezibuyekezo zansuku zonke, izithombe kanye nobufakazi obukhona obuvela ezindaweni ezithakazelwayo ezivakashelwe. Ikhalenda elinemininingwane lezigaba "I-Roadshow"
21 Septhemba 2019: IBologna, umcimbi wokuqala Phila AwrWinci ( http://awrambassador.com/ )
Septhemba 22, 2019: Siena, isethulo selayini entsha yokuthengisa.
23 Septhemba 2019: Milan, incazelo yezivumelwano ze Thola i-Web Srl yesikhulumi se crowdfunding nokubambisana kwezentengiso nezinkampani ezibaluleke kakhulu eLombardy naseVeneto.
Ngo-24 Septhemba 2019: ITurin, ukuvulwa okusha I-Piedmontese Territorial Agency kanye nokubekwa kwesivumelwano sokuhweba ne Xriba (https://xriba.com)
Septhemba 25, 2019: ICuneo, isivumelwano sezentengiselwano ne-Consortium yendawo ebalulekile, ebala ngaphezulu Izinkampani ezingama-450.
Ngomhla ka-26 no-27 Septhemba 2019: IGenoa, umhlangano onikezelwe ekuhlanganiseni komoya weqembu nezinombolo zezentengiselwano ezisebenza eGenoa nokuhlangana nabaphathi be Ikusasa (https://www.futurenergyonline.it/ )
Ngomhlaka 28 Septhemba 2019: IBari, ukuhlangana nabameli bezentengiselwano ukwenza ukubambisana okuzayo nobambiswano nezinkampani zasekhaya.
Uma ufuna ukuhlala usesikhathini ku-Roadshow, hlala uxhumeke kubhulogi lethu, elizokunikeza ukuqonda kwansuku zonke, izithombe, bukhoma ngokuthe ngqo njalo phakathi nesonto.
Tags: imicimbi yezentengiso ukumaketha ibhizinisi umgwaqo oshubile 2019 ukuqala okuhle
Categories: Izinkampani , Qalisa